त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्
घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्
अन्तिम अपडेट गरिएको मार्च 4, 2018
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल बुल प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। "ब्रेट"। हाम्रो विक्टोरिया वान्यामा बालबालिकाको कथा प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयको अचम्मका घटनाहरूको पूर्ण खातासम्म पुग्दछ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै थोरै ज्ञात तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई पहिलो केन्यामा प्रिमियर लीगमा विशेष रूपमा राखिएको इतिहासको बारेमा थाहा छ, तर केहिले हाम्रो विक्टोरिया वान्यामामाको बायोलाई विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: प्रारम्भिक वर्ष
उनको पूरा नाम विक्टर मुगुबी वानामा हो। उहाँ जून 25 को 1991th दिनमा नैरोबी, केन्यामा जन्मनुभएको थियो। गरीब आमाबाबुको जन्म भयो, (श्री र श्रीमती वानीमा) जसले पछि खेलकुदमा अवसर पाए।
कठिन बचपनको सुरुवातको बावजूद, विक्टर बढ्दै गर्दा केवल एक साधारण बच्चा थियो जसले लोकप्रिय अफ्रिकी खेले "चाबा बाबा ना चिया मामा" AKA "मामा र पापा प्ले" तिनको बचपनका साथीहरू जस्तै। उहाँले धेरै कठोरता बढ्दै गयो। गम्भीर रूपमा, विक्टरले घरको शुल्कको लागि घर काट्यो र कहिलेकाहीँ त्यो दिनको लागि भोजन बिना जान्छ।
कठोर तथ्याङ्कहरू बाँच्ने बोलीमा, उनले शरीर र आत्मालाई बरसात राख्न केही प्रावधानहरू बिक्री गरेर हिँड्न थाले। कहिलेकाहीं बाटोहरूमा, तिनले केन्या प्रहरी बल द्वारा पीडित आपराधिक गिरोहहरूलाई गम्भीर रूपमा हेर्नेछन्।
खेलकुदको पिचमा पटरिक वेरा फुटबल ऊर्जा प्रदर्शन देख्दा फुटबलको विचार आयो। यो पनि आफ्नो ठूलो भाइ पछि आए र स्थानीय फुटबलर मैकडोनाल्ड मार्गा ले उनलाई फुटबल प्रयास को लागि सल्लाह दिए। उनीहरूले केन्यान्सको छेउमा पैट्रिक वेरालाई बनाइएका समान शरीरको विकास गर्दै थिए, विक्टरले उनीहरूलाई आफ्नो माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने शर्तमा उनीहरूलाई समर्थन गरी आमाबाबुसँग प्रयास गर्ने फुटबल गर्न निर्णय गरे। तिनको ठूलो भाइको बावजूद पहिले फुटबलमा जान्छ, तिनका आमाबाबुले विश्वास गरेको भविष्यको थिएन र देशभित्रको ग्यारेन्टी थियो।
वानीमा आमाबाबुबाट सल्लाह प्राप्त गर्ने र तिनको भाइको आर्थिक सहयोगको साथ कामुकुञ्ज हाई स्कूल, जो फुटबल टोली सफल भयो। हाई स्कूल छोडेर, उनले जेएम जे अकादमीसँग तीन वर्षसम्म पनि खेलेका थिए जसमा उनले केन्याई प्रिमियर लिग क्लब नैरोबी सिटी स्टारहरूमा पनि सहभागी भए।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: चमत्कार
एक चमत्कार पहिले उनको परिवारमा आए जब वान्यामा ठूलो भाइ म्याकडोनाल्ड मार्गाले स्वीडिश स्काउट्सले हेरे जसले उनलाई स्वीडिश क्लब हेलसिङ्गबर्गको लागि खेल्न थाले। म्याकडोनाल्डले आफ्नो बच्चा भाइ जस्तो समान सामान निर्माण गरेको थियो, विक्टर र उनीहरूको स्वीडिश क्लबले यसलाई प्रेम गरे। विक्टर (बायाँ) र तिनको ठूलो भाइ (चित्र दायाँ) बीचको फरक छ।
म्याक डोनाल्डको लागि कुनै प्रतिस्थापन फेला पार्न पछि, र केन्यामा विक्टर वान्यामाको पछाडीको क्षमतालाई सूचित गरिसकेपछि उनी स्क्यान्स पठाउन लागेका थिए क्यानाडामा।
विक्टर वान्यामामा पहिलोपटक यूरोप जानुभयो एक्सएनमक्समा आयो जब उनी 2007 मा स्विडिश क्लब हेलसिङ्गबर्गमा गएर जहाँ उनको भाइ, म्याकडोनाल्ड मार्गा फुटबल खेले। आफ्नो भाइ मैकडोनाल्ड मार्गा प्रस्थान गर्न पछि सेरी ए पक्ष पर्मा 2008 मा, विएनामा एक सानो ब्रेकका लागि केन्या फर्कियो। यस अवधिको दौरान, उनको स्थानान्तरण बेल्जियम लीगको बर्सचोट एसीमा शुरु गरिएको थियो। स्कटलियन दिग्गज, सेल्टिक्समा जान अघि उनी दुई मौसमको लागि रुँदै थिए।
Wanyama एक अज्ञात वस्तुको रूपमा क्याल्टिकमा पुग्यो। पहिलो टोली अघिल्लो सिजनमा काठमान्डु भएको थियो 'इस्पातको पुरुष' मा ल्याउन जुन केही गुरुत्वहरू दिइन्थ्यो र विरोधमा केही डर लागेन।
मैदानमा हिँड्ने क्रममा, वान्यामाले केल्टिक स्केडमा आइसकेका थिए जुन मिडफिल्डर्ससँग पहिले नै जितिएको थियो। प्रारम्भमा देखि, उहाँले मिडफील्ड को आज्ञा दिए र केहि बिंदु मा एक अधिक मान्यता प्राप्त लीग मा जाने को बारे मा सोचा। धेरै अटकलें र एक वार्तालाप मा पहिले को ब्रेकडाउन पछि, 11 जुलाई 2013 मा, वान्यामामा प्रीमियर लीग साइड साउथमप्टन को लागि शुल्क को लागि हस्ताक्षर गरे 12.5 मिलियन पाउंड को दावा गरे, उनलाई पहिलो केन्याले प्रिमियर लिगमा खेल्न सक्ने। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: सम्बन्ध जीवन
विक्टर वानामा एक व्यक्ति हो जुन साँच्चै विश्वास छ र थाहा छ जहाँ प्रेम भेट्न।
केन्याका सम्पूर्ण मिडफिल्डर र केन्या मोडेल ट्रीसी म्याकनेभाइको बीच रोमांस स्वीकृत भएको छ। जस्तै यो अक्सर भनिएको छ, दुबै प्रेमी एकअर्काको लागि एकदम राम्रो मिलान हो।
ट्रेसी एक धेरै सुन्दर महिला हो। त्यो लागि एक मोडेल हो "Nywele क्रिएटिव" जो बाल उत्पादन र एक्सटेन्सनसँग सम्बन्धित हुन्छ। उनले एक पटक एकछिन मनपर्ने फुटबल फुटबलरसँग फोटो पोस्ट गरे। पछि आएका टिप्पणीहरू आराम गर्नका लागि दृष्टान्तहरू राखियो।
उनीहरूको फ्यानबाट टिप्पणीहरू एक हुन् जसले आफ्नो सम्बन्ध पुष्टि गरे एक वर्ष भन्दा बढी र अर्कोलाई उनीहरूलाई आग्रह गरे "पहिले नै विवाहित हुनुहोस्" भन्दै "तिमी केटाहरू त्यस्ता सुन्दर दम्पती हुन् जुन अहिले एक वर्ष भन्दा बढी भएको छ!" विक्टर बिस्थापित हुन अघि यो समय मात्र हो।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: व्यक्तिगत जीवन
विक्टर वानीण्मासँग उनको व्यक्तित्वको निम्न विशेषताहरू छन्।
विक्टर वानामाको शक्ति: उहाँ शक्तिशाली, शक्तिशाली, अति कल्पनाशील, वफादार, भावनात्मक, सहानुभूतिशील, उत्साहित हुनुहुन्छ।
विक्टर वानामाको कमजोरीहरू: उहाँ मूडी, निराशावादी र संदिग्ध हुन सक्नुहुनेछ।
क्या विक्टर वैनीनामा मनपर्छ: उहाँ प्लेस्टेशन, खाने चिकन, बाह्य जीवन, गोल्फ, घर आधारित शौकहरू, नजिकैको वा पानीमा आराम गर्दै, प्रियजनहरूलाई सहयोग गर्न, साथीहरूसँग राम्रो भोजन गर्नुहुन्छ।
कुन वानामा नमनपराउँछ: अजनबारीहरू, चलचित्रहरू हेर्दै, उनको आमाको कुनै आलोचना र व्यक्तिगत जीवनको खुलासा
संक्षेपमा, वानामा गहिरो सहज र भावुक छ। उहाँ सहानुभूतिशील हुन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँसँग नजिक रहनु भएकोमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। वानीमा आफ्नो देशभरको धेरै वफादारी हो जसले उहाँलाई र उनको क्यूबलाई प्रेम गर्दछ।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्परिवार
सुरुमा, तिनका अभिभावकहरू राम्रै थिएनन्। तिनीहरूको पुस्ताले युरोपमा बनाउन थालेपछि उनीहरूको कथा परिवर्तन भयो। त्यसकारण तिनीहरू एक खेलकुद परिवार बने। विक्टरको भाइ म्याकडोनाल्ड मार्गा पनि एक पेशेवर फुटबलर हो, उनको अन्य भाइहरू थमस र सिलभेस्टर वानीमा लिखित रूपमा केन्याई प्रिमियर लिगमा फुटबलर छन्।
आश्चर्यजनक, विक्टर वानामाका पिता नूह व्यानामा (तल चित्रित), एकपटक 1980s मा एएफसी तेंदुए को लागि एक फुटबल थियो। नूहले यसलाई फुटबलमा कहिल्यै बनाएन।
नूह एक गरीब मानिसको जस्तो देखिन्छ कि उनको केन्याको डग कंगो विरुद्ध मित्रतामा सुरक्षा कर्मचारीहरूले दुर्व्यवहार गरे।
बहिनी र आमा: वानामाको बहिनी मर्मी हालै संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक पेशेवर बास्केटबल खेलाडी बनेको छ। वान्यामामा आफ्नो आमालाई धेरै भन्दा तल चित्रित गर्दछ। उहाँले तिनलाई सबै भन्दा राम्रो कुराको रूपमा हेर्नुहुन्छ जुन आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा उहाँसँग भएको थियो। तल विक्टर वानामाको आमा र बहिनीको तस्बिर हो।
भाइरस: हालको समयमा हालैको घेराबन्दीमा उनीहरुलाई कम चोट लागेको छ भने पूर्व केन्या अन्तर्राष्ट्रिय मिडफिल्डर म्याकडोनाल्ड मार्गा सबैले आफ्नो सानो भाई विक्टर वानामाको मौसमको उकालोमा बाक्लो पनि खुसी भइन्।
लुम्बिनीको रूपमा, जबकि मार्गाको क्यारियरले इटालियन फुटबलको निचला पारिस्थितिकीहरूमा स्पष्ट रूपमा निस्किएको छ, विएमामाले इंग्ल्याण्डमा फुटबलको उत्कृष्ट फुटबलको आनन्द उठाउँदै आएको छ। मार्गा एक क्यारियर भाइ हो। उनको परिवारको बारेमा उनको शब्दहरु ...
"हाम्रो परिवार यति नजिक छ। मेरो आमा र बुबाले हामीलाई नजिक बनाउनुभयो " मार्गाले भन्यो। "बढ्दै गयो, तिनीहरूले भने, 'मलाई मेरो भाइ, धेरै धेरै मद्दत छ। हामी सँगै फुट र खेल्नेछौं विद्यालय, म पहिलो समाप्त हुनेछ र विक्टरको लागि पर्खनुहोस् ताकि हामी एकसाथ घर जान सक्छौ - जस्तै कि चीजहरू। कहिलेकाँही म खेलिरहेको छु र म कसैलाई मेरो भाइ लात लगाउनेछु। जब यो भयोम खराब महसुस गर्नुहोला र कहिलेकाहीँ यसलाई रोक्न लडाइन्छ " Mअर्जेन्टिनाले आफ्नो सट्टाको क्यान्सरको सँधै सँधै एक सूक्ष्म संकेतमा प्रकट गर्यो। यो एक दशक भन्दा बढी हो किनभने मार्गाले पहिले आफ्नो व्यानमा व्यान्यामामा लिनुभयो।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: सडक नामकरण विवाद
केही समय पहिले, वानमामा तान्जानियामा सम्मान गरे पछि एक सडक उनको नाम डार्सा सलाममा नामकरण गरे पछि।
तथापि, यस कदमले विवादलाई पछाडि पार गरेपछि सडक चिन्ह उनको नाम झिक्यो।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: पसंदीदा भाव
"मैले बार्सिलोना विरुद्ध गोल गरे पछि महसुस मात्र अविश्वसनीय थियो! मैले मेरो जीवनमा केहि पनि महसुस गरेन। यो सेक्स भन्दा राम्रो थियो। हामीले कुनै पनि तरिकामा जित्न मनाएनौं। मैले सुन्तलाको रस पकाएकी थिइन्, त्यो असाध्यै सुन्दर थियो। "
2-1 विजयस बार्सिलोना पछि बेल्जियमका अखबार हेट निईबेल्लड को वानामा (उनले गोल गरे) (नोभेम्बर 2012)
"मैले केल्टिकमा सहभागी गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरू एक पारिवारिक क्लब हो, जहाँ म राम्रो बाटोमा विकास गर्न सक्छु। म केल्टिकमा खुसी छु। "
विक्टर वानीमा (नोभेम्बर 2012)
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्क्रोध
विक्टर वान्यामामा कहिलेकाहीँ उनीहरु लाई रातो / पहेंलो कार्ड अपराध गर्दछन् जब उनीहरुलाई चेक मा आफ्नो टेस्ट राखन को क्षेत्र मा खुफिया जान जान्छ।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: केन्याई बच्चाहरूलाई सन्देश
र कुनै पनि बच्चाहरु को समान वृद्धि को सपनाहरु को लागि एक संदेश थियो। उहाँले थप गर्नुभयो: "अब टिभीमा प्रिमियर लीग हेर्दै गर्दा धेरै अन्य केटाकेटीहरू छन् जुन उनीहरु बृद्धि हुँदा यहाँ हुन सक्छन्। मलाई लाग्छ मैले राम्रो उदाहरण सेट गरेको छु र यो देखिन सक्छ। जब म त्यहाँ जान्छु, जवान छोराछोरीहरूलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छु र तिनीहरूलाई विश्वास गर्न र कडा मेहनत गर्ने प्रयास गर्छु जुन उनीहरूको सपना प्रिमियर लिगमा खेल्न सक्छ। ती बीकेहि पनि गर्न सक्छ जस्तै आफैमा प्राप्त गर्नुहोस्। "
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्: एउटा कलाकार
2015 मा, वान्यामामा एक सानो फिलिमको उत्पादनमा भाग लिनको लागी केन्यामा रहेको फुटबल Mdudu Boy, लिखित र निर्देशक एला स्मिथ द्वारा निर्देशित।
साथै, त्यो छोटो फिलिममा एक अभिनेता अभिनेता भएको छ "मुठौवा को सिंह"। यो स्लामबाट फुटबल फुटबल स्टेडियममा फुटबल यात्रामा प्रेरणात्मक फिल्म हो।
हालै, Wanyama छ केन्याका फुटबल बारे मा एक लघु चलचित्रको उत्पादनमा भाग लिइएको र निर्देशित Mdudu Boy भनिन्छ अभिनेत्री एला स्मिथ
केल्टिक एफसीमा आफ्नो क्षणमा, वान्यामामा केल्टिक चैरिटी फन्ड्स, केल्टिक एफसीको एक धनी हात दान्या अफ्रिकामा रक्सी राहत प्रभावहरूको समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ।
र उनीहरूले नैरोबीको बाहिरबाट आफ्नो यात्रालाई उच्च-उडान अंग्रेजी फुटबलमा अन्य बच्चाहरूलाई प्रेरणा दिलाउन चाहन्छन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो विक्टर Wanyama बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
मोहम्मद एलनेनी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जर्ज वेह बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको कुरा हो
फेलिक्स ओनो नोभेम्बर 21, 2018 मा 2: 21 अपराह्न
टिप्पणी: वान्यामा एक राम्रो फुटबलर हो र हामी केन्याहरू उहाँका गौरव हुन् .मह जे ब्लेजले हामीलाई हामीलाई गभर्नरले हामीलाई प्रेरणा दिन्छन्। हामीलाई प्रेरणात्मक सहयोगले 2wadz Rchng Him.Congratz ब्रो Vicky.2ko Nyuma योको Mayouthz वा केन्या .केपी Kutufungulia Njia Wth टिम Tuunde केन्या Ndogo Ktk Mji Wa Uingereza।
Bendict Lando जुन 23, 2019 मा 7: 05 अपराह्न
बधाई छ Wanyama माथि हाम्रो देश बलिदान Wanyama को लागि आफ्नो आत्म बलि
सामोन कलू बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: २4अगस्ट, २०१।